Sunflower: Linux အတွက် dual-pane ဖိုင် Explorer Linux မှ
ငါတို့အရင်ငါတို့ပြောသကဲ့သို့၊ GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်သောဒြပ်စင်တစ်ခုစီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်မွေ့နိုင်သည် ဖြန့်ဖြူး Desktop Environments တစ်ခု၊ Window မန်နေဂျာများ၊ Boot မန်နေဂျာများ၊ Login Managers များ၊ "ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ"၎င်းတွင်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအခြားရွေးချယ်စရာများရှိသည်၊ ဥပမာ - ဟုခေါ်သည် "နေကြာ".
ဒါကိုသတိရကြစို့ "ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ" များသောအားဖြင့်မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတွင်မဆိုအဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောပရိုဂရမ်များဖြစ်သည် operating systemနှင့်၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများကိုစီမံရန်၊ အပလီကေးရှင်းများအပလီကေးရှင်းများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထိုအထဲတွင်လည်း GNU / Linux များ အသီးအသီး « Desktop Environment » ပုံမှန်အားဖြင့်တစ် ဦး က default ဆောင်ခဲ့ရမည်။
ကျနော်တို့ယခင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသကဲ့သို့, များစွာသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် "ဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ"နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ GUI (Desktop) လျှင်အဖြစ် CLI (Terminal) အချို့သည်လူသိအများဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးသောအလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာများဖြစ်သည် Nautilus, "လင်းပိုင်" y သုန.
ထို့အပြင်၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်မှတ်ချက်ပေးခြင်းခံရသည် ယခင်ထုတ်ဝေဤစာစောင်ကိုဖတ်ပြီးသွားသောအခါသင်သည်၎င်းတို့ကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
Midnight Commander 4.8.26 ကို interface ဒီဇိုင်း၊ subshell buffer support နှင့်ပိုမိုသောအရာများဖြင့်ရောက်ရှိသည်
1 နေကြာ - Dane Pane File Explorer
1.2 ဒေါင်းလုပ်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်များ
နေကြာ - Dane Pane File Explorer
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဟုပြောသည် "ဖိုင် Browser" ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"နေကြာရှည်သည်အသေးစားနှင့်အလွန်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သော dual-pane ဖိုင်မန်နေဂျာ။ ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး GNOME Desktop Environment နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုကိုပြုလုပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကန့်သတ်မထားပါ။"
ထို့အပြင်၎င်း၏၌တည်၏ GitHub တွင်တရားဝင်ဆိုဒ်သူတို့အကြောင်းကိုထည့်ပါ "နေကြာ" လာမည့်:
"Sunflower သည် plugins များအတွက်အထောက်အပံ့နှင့်အတူအပြည့်အဝလိုက်ဖက်ပြီး Wayland တေးရေးဆရာများ၏ဇာတိဖြစ်သည်။"
နောက်ဆုံးတော့၌သူ၏ GitLab ကွန်ရက်စာမျက်နှာသတင်းပို့ပါ "နေကြာ" လာမည့်:
"နေကြာကိုဗားရှင်းနံပါတ် ၀၄ တွင်ရရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီ version မှာ GTK0.4-based interface အသစ်ပါ ၀ င်ပြီးအနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့ Python3 အထောက်အပံ့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် interface ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် Sunflower ကုဒ်ကိုပြန်လည်ရေးသားခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုကျဆင်းစေပါသည်။"
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်၎င်းကိုစမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည် MilagrOS (Respin ကို MX Linux 19.X မှ XFCE ဖြင့်တည်ဆောက်သည်)သင်၏လည်ပတ်ပြီးနောက် download အပိုင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးမှ၎င်း၊ "Debian"လက်ရှိတွင်ခေါ် "နေကြာ-0.4.62-3.all.deb"အောက်ပါ command ဖြင့် install လုပ်ပါ -
ဤရွေ့ကား, ဖြစ်ကြသည် မျက်နှာပြင်ရိုက်ချက်များ (ဖန်သားပြင်) ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကနေရရှိသော "ဖိုင် Browser":
အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာ menu ကို
နေကြာပန်း ဦး စားပေး menu ကို
အမြန် Terminal ဖိုင်မန်နေဂျာ Cfiles
ကြိုးစားအားထုတ်မှု Mark II ကို
fff (မြန်မြန်ဆန်ဆန် File-Manager)
ဖိုင်ကို Browser ကို
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Sunflower»စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် ဖိုင် Explorer ကို နှစ်ဆ panel, သေးငယ်နှင့်ငါတို့အဘို့အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက် GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Sunflower - Linux အတွက် Dual Pane File Explorer တစ်ခု